SEO manao fanatanjahan-tena
Tamin'ny taona 2004, afaka nijery ny pejy voalohan'ny Google SERP ny olona iray tamin'ny fampiasana tetika sasany toy ny algorithm fanavaozana (oh: Panda sy Pigeon). Na eo aza izany, ny fampiasana ireo tetika ireo dia afaka mametraka tranonkala ho adino tanteraka. Mba hahafahana mijanona ao amin'ny pejin'ny fikarohana Google, mila mila fanampiana avy amin'ny matihanina ianao, na raha efa voasazy ny tranokalanao dia misy zavatra azonao atao mba hanitsiana ilay olana - umzug firma zuerich. Ireto manaraka ireto dia torohevitra avy amin'i Ivan Konovalov, mpitantana ny Success Successor Semalt Digital Services, izay hanampy anao hahatratra ny toerana ambony Google Google.
Ny votoatin'ny namana.
Ny tanjon'ny Google dia ny mampiseho votoaty mahaliana sy mahasarika ny mpampiasa. Miankina amin'ny sehatry ny orinasa miasa aminao, mety mila ilaina ny fanavaozana ny tranokala isan-kerinandro. Raha tsy havaozina izy io, dia mety ho an'ny mpampiasa izany. Noho izany, inona SEO tokony atao dia ny manohy ny fanavaozana ny tranonkala mba hahafahany mampifandray ny mpampiasa mandritra ny fotoana maharitra..
Andinin-jatovo mivelatra sy dika mitovy.
Ny lahatsoratra mirongatra dia midika fa nanoratra lahatsoratra izay manana hevitra mitovy amin'ny lahatsoratra hafa. Ny votoaty duplicate dia midika fa ny manoratra na manaparitaka ny zavatra mitovy amin'ny lahatsoratra samihafa dia azo tsidihana mora foana. Na izany aza, tamin'io fotoana io ihany, io olona io dia tsy midika ho nanao ratsy. Raha toa ka mitranga izany, ny zavatra azonao atao dia ny manakarama mpanoratra mpanoratra matihanina mba hanoratra ny votoaty avo lenta sy miavaka.
Raha toa ka mitantana raharaham-barotra iray dia zava-dehibe ny tsy manangana rohy na manome anao vokatra ho takalon'ny fijery tsara. Ankoatra izany, aza hadino ny mangataka ny mpitoraka blaogy hampiditra ny toetra "nofollow". Ankoatra izany, raha mpivarotra an-tserasera iray dia tsara ny tsy manampy ny toetra "dofollow". Saingy raha mitranga izany, ny zavatra azonao atao dia ny mamporisika ireo mpandinika mba ho marin-toetra na amin'ny fanaovana antoka fa ny vokatra azonao amidy dia tena avo lenta.
Alohan'ny hametrahana rohy ao amin'ny tranokalanao, dia tsy maintsy mamorona safidy SEO araka izay azo atao ianao. Ny safidy tsara indrindra dia ny manakarama mpitsabo matihanina SEO manam-pahaizana manokana izay afaka mamakafaka tranonkala iray ho an'ny fanatsarana ary mahatonga azy ho laharam-pahamehana amin'ny SERPs. Noho izany, tsy vitanao ny hanatsara sy hampihenana ny tranokalanao fotsiny, fa hampandroso koa ny raharahanao.